‘Maaltu sadarkaa kanarraan nu gahe dhimma jedhuutu ulaagaa ta’uu qaba’ | Kichuu
‘Maaltu sadarkaa kanarraan nu gahe dhimma jedhuutu ulaagaa ta’uu qaba’
Posted on February 22, 2018 by kichuu_admin
Ministirri Muummee Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dessaaleny torbee darbe aangoo gadhiisuuf gaaffi erga dhiyeessanii as, eenyuutu bakka isaanii bu’a kan jedhu gaaffii namoota hedduu mariisisaa jirudha.
(voaafaanoromoo) — Dr. Abiy Ahimad, Obbo Lammaa Magarsaa, Obbo Dammaqaa Makonnin, Dr. Dabratsiyoon Gabramika’el fi Dr. Warqinaa Gabayyoo namoota irra deddebiin maqaan isaanii marsaalee hawaasaa irratti ka’aa jiruudha.
Namoonni maqaan isaanii dhaahamaa jiru kunneen, Ministira Muummee ta’uuf ulaagaan heera mootummaa guutuu qaban maali? Ulaagaa kana hin guutan yoo ta’e hoo carraan biraa qaban jiraa?
Dhimma kanarratti BBCn yaada isaanii kana kennan Pireezidantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi hayyuun seeraa Obbo Tashaalaa Abarraa Keeyyata 73/ 1 heera mootummaa jalatti namni muummicha ministeeraa ta’u misensa mana maree bakka bu’oota uummataatii ta’uu qaba akka jedhu himan.
Miseensa Paarlamaa sababa garaa garaan hanqatetti bakka buusuun nama bakka bu’e sana ministira muummee gochuun filannoo biraa akka ta’es obbo Tashaalaan ni himu.
”Miseensi paarlaamaa waggaa shanshaniin filatama. Sababa garaargaraatiin miseensi filatame tokko bakka sana kan gadhiisu yoo ta’e ykn sabni filate sun namniin filadhe tajaajilan irraa eegu naa kennaa hin jiru, amnataa irraa dhabeera yoo jedhe bakka bu’aa sana kaasuu yoo barbaade adeemsa itti kaasu qaba.” Jedhu obbo Tashaalaan.
Itoophiyaan amma jeequmsa heera ( constitutional crisis) keessa erga galtee waggaa dheeraa ta’eera kan jedhan ogeessi seeraa kun, Wanti qabatamaan biyyaatti keessatti mul’atu fi feedhii uummataa irraa wanti hubatamu Oromiyaa keessaa namni tokko bakka ministira muummee bu’uu akka qabuu dha.
Akka obbo Tashaalaan jedhanitti ”Ulaagaa kan ta’uun isarra jiraatu maaltu asiin nu gahe isa jedhuudha. Ministira muummee aangoo irraa buusuuf kan sababa ta’e qabsoo uummata Oromooti. Gaaffii Uummata Oromoof deebin argamuu qaba kan jedhu addunyaa irraas, nannoo biraa fi Itoophiyaa keessaa yaadni dhufaa jira. Heera ofii cabsan sanarratti hirkachuun wanta barbaachisu natti hinfakkaatu.”
”Ce’umsa tolchuu yoo ta’e dubbii inni guddaan wanti guddaan jijjiiramuu qabu lafa kanarra jira ” innis heerrii mataansaa keessa deebi’amee ilaalamuu qaba jijjiiramuu qaba” jedhan Obbo Tashaalaan.
Walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaa fi Somaalee irratti qabxiilee muraasa